Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || एएफयूको सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसका सबै विद्यार्थीको परीक्षा चितवनमा, आन्तरिक परीक्षाको नतिजा संकास्पद ! – kayakairan.com
एएफयूको सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसका सबै विद्यार्थीको परीक्षा चितवनमा, आन्तरिक परीक्षाको नतिजा संकास्पद !
२४ भाद्र २०७६, मंगलवार ०२:०६
आन्तरिक परीक्षाको नतिजा संकास्पद देखिएपछि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय(एएफयू)बाट सम्बन्धन प्राप्त देशभरका निजी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको परीक्षा अहिले चितवनमा भइरहेको छ । अहिले कृषि तथा वन बिषयमा स्नातक तह(बीएससी एजी/फरेष्ट्री)को पहिलो सत्रान्तको परीक्षा चलिरहेको छ ।
एएफयूका आंगिक क्याम्पसहरुको परीक्षा सम्बन्धित क्याम्पसहरुमै भइरहेको भएपनि निजी क्याम्पसहरुलाई भने चितवन तानिएको हो । भरतपुरस्थित मैयाँदेवी कन्या कलेजमा देशभरका निजी क्याम्पसहरुमा अध्ययनरत १ सय ३६ जना विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिइरहेका छन् । आन्तरिक परीक्षामा सम्बन्धित क्याम्पसका अध्यापकले नै प्रश्नपत्र निकाल्ने गर्छन् । स्नातक तहका सबै बिषयहरुमा १० नम्बरको आन्तरिक परीक्षा लिने गरिएको छ ।
निजी क्याम्पसहरुले प्रायः विद्यार्थीहरुलाई पूर्णाङ्क र बाँकीलाई पनि धेरै नम्बर दिएको भेटेपछि आंगिक तथा केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्ययरत विद्यार्थीहरुले बिरोध जनाएका थिए । उनीहरुले अन्तिम परीक्षामा पनि यस्तै हुन सक्ने भन्दै विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । “निजीमा पढ्ने अधिकांशलाई पूर्णाङ्क दिएको भेटिएपछि सबैको दबाबमा परीक्षा चितवनमै लिन विश्वविद्यालय बाध्य भयो”, केन्द्रिय क्याम्पसमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने, “अन्तिम परीक्षा यहाँ नलिएको भए आन्तरिकमा जस्तै नतिजा आउने निश्चित थियो ।” यस बिषयमा प्राध्यापकहरुले समेत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक प्रा.डा. नारायण जोशीले भने निजी क्याम्पसको परीक्षा पहिलो पटक लिन लागिएको भन्दै अन्य कारण नभई विश्वविद्यालयको निर्णयको कारण चितवनमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको दाबी गरे । अदालतको आदेश अनुरुप निजी क्याम्पसहरुले पठनपाठन सञ्चालन गरेकाले सोही आदेश बमोजिम विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।
हाल पोखरा, टीकापुर, वर्दिवास, कपिलाकोट र पाख्रिवासमा एएफयूको कृषि विषय पढाउने आंगिक क्याम्पसहरु छन् । कटारीमा वन विषयको आंगिक क्याम्पस छ । त्यसैगरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत, गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर बाँके, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज नवलपरासी, जीविका कृषि क्याम्पस सुनसरी र सिद्धान्त कलेज गैंँडाकोटले सम्बन्धन पाएका थिए । सिद्धान्त कलेज गैंँडाकोटले वनको कार्यक्रम चलाउन सम्बन्धन पाएको थियो ।
परीक्षामा विश्वविद्यालयमै रहेको केन्द्रीय र आंगिक क्याम्पसहरुबाट गरी ४ सय १५ जना कृषि र १ सय ३० जना वन विषयका सहभागि छन् । सम्बन्धन पाएका निजी क्याम्पसहरुबाट कृषितर्फ १ सय ३२ र वनतर्फ ४ जना विद्यार्थीहरु सहभागि छन् । विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपती प्रा.डा. शारदा थपलियाले भने निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा परीक्षा लिनका लागि स्थान अभाव भएका कारण अन्य क्याम्पसमापरीक्षा सञ्चालन गरिएको दाबी गरिन् । विद्यार्थीहरुले भने विश्वविद्यालयमै परीक्षा नलिई अन्यत्र लिइएको भन्दै बिरोध गरेका थिए । पहिलो सत्रान्तको ५० पूर्णाङ्क मध्ये ४० नम्बरको अन्तिम परीक्षा अहिले चलिरहेको छ ।
एएफयूले गोर्खा, रोल्पा, बाँके, स्याङ्जालगायतका जिल्लाहरुमा पनि आंगिक क्याम्पस विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सम्बन्धनको विवाद कायमै
कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयले निजी क्याम्पसहरुलाई कृषि तथा वन विषय पढाउन सम्बन्धन दिएपछि सुरु भएको विवाद अझै अन्त्य भएको छैन । विश्वविद्यालयले आठवटानिजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएलगत्तै विद्यार्थी र प्राध्यापकले आन्दोलन गरेका थिए । त्यही दबाबमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि सम्बन्धन पाएका निजी क्याम्पस सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु रनगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै विश्वविद्यालयलाई भर्ना खोल्ने बाटो खुलेको थियो ।
पछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सम्बन्धन दिने निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन पेश गरे । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्ने आदेश दियो । तर त्यसपछि भएको आन्दोलन विश्वविद्यालयले थेग्न सकेन । सर्वोच्चको सुनुवाइ कुर्ने गरी २०७५ साउन १४ गते विश्वविद्यालयले निजीको भर्ना प्रक्रिया रोक्का गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसअघि विश्वविद्यालयले २० दिनसम्म निजीमा समेत भर्ना गर्नका लागि सूचना जारी गरेकोमा २१औँ दिनमा निजी हटाएको थियो । सो पश्चात साउन ३० गते सर्वाेच्च पुगेका निजी क्याम्पसलाई संशोधित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी अदालतले विश्वविद्यालयलाई पुनः आदेश गरेको थियो । यसैलाई टेकेर निजी क्याम्पसहरुलेकार्तिक २० गते भर्ना आह्वान गरेर पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन् । नीजि कलेजले सम्बन्धन पाएर पठनपाठन गतिविधि सुरु गरे पछि पनि कृषि तथा बन विज्ञान विश्विद्यालयका विद्यार्थी र प्राध्यापक आन्दोलन गरे र सर्बोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा समेत हालेका थिए ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविध्यालयले २०७५ असार २० गते देशभरका ७ कृषि र एउटा वन विज्ञान क्याम्पसलाई संचालनका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । पठनपाठन सञ्चालनमा आएपछि विश्वविद्यालयले नीजि क्याम्पसहरुको अनुगमननै नगरेको स्रोत बताउँछ । अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै निजीमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु पनि कस्तो फैसला आउला भन्नेमा चिन्तित छन् । “निजीलाई दिइएको सम्बन्धन रद्द भएमा केन्द्रमा समायोजन गराउलान् भन्ने आशा बाँकी नै छ”, परीक्षा दिन झापाबाट चितवन आइपुगेका एक विद्यार्थीले भने ।